Tilmaamo si aad uga badbaado xagaaga haddii aad tahay naqshadeeye | Abuurista khadka tooska ah
9 tallaabo oo aad kaga badbaadi karto xagaaga haddii aad tahay naqshadeeye qaabeysan
Fran Marin | | La cusboonaysiiyay 04/08/2016 21:37 | Design Graphic, Dhiirrigelinta
Xagaagu waa wakhtigaas sanadka ee u ooya a Wadar goynta iyo daqiiqad nasasho iyo nasasho ah. Si kastaba ha noqotee, maahan in dhammaan naqshadeeyayaashu ay fursad u leeyihiin inay ka baxaan goobahooda shaqada, ama ugu yaraan maahan inta ay jecel yihiin. Taasi waa sababta aan u baranayno inaan ku ciyaarno kheyraadkeena si aan ula qabsanno sida ugu macquulsan xagaaga oo keena mashruucyo iyo shaqooyin waqti-gaaban ah.
Kahor abaabulka waa inaad lahaataa fikrad cad: Waqtiyada firaaqada ah ee shaqada ka baxsan aad bay muhiim u yihiin waana lama huraan. In kasta oo shaqadu (haddii ay tahay shaqo aan ku qanacsanahay) ay naga mudan tahay fiiro gaar ah, haddana waxaa jira dhinacyo kale oo noloshaada ka mid ah oo ay tahay inaad daryeesho oo ay tahay inaadan iloobin. Haddii aad tahay mid ka mid ah nashqadeeyayaasha nasiib wanaag ama nasiib darro aan heli doonin fasaxa ay rabaan, ha ka welwelin. Waxaa jira qodobo aad ku xisaabtami karto si aad xagaaga uga dhigto mid xoogaa fudeyd iyo khibrad raaxo leh leh. Asxaabteena ka socda Maalmaha Hurdada Waxay la wadaageen talooyin taxane ah si ay uga badbaadaan xilliga xagaaga. Maqaal ugu xiisaha badan iyo in kabadan mid aan ubaahanahay inaan aqrino. Halkan waxaan idinkula wadaageynaa taxanahan talooyinka waxtarka leh iyo qaar kaloo dheeri ah.
1 Ha moogaanin in dawada looga hortago dulinku
2 Mashaariicdu way dhacayaan!
3 Xitaa fikradaha ugufiican waxay ku dhintaan gudaha madax aad u kulul
4 Fuuq baxa ayaa ah waxa ugu muhiimsan!
5 Muraayadaha indhaha ... Muhiim
6 Ka ilaali maqaarkaaga falaaraha qorraxda
7 Is abaabul oo ka fikir ciriiriga taraafikada
8 Ka ilaali naftaada hurdo la’aanta xagaaga
9 U diyaarso fasaxaaga sida ugu fiican ee aad u ogtahay
Ha moogaanin in dawada looga hortago dulinku
Xilliga xagaaga iyo fasaxa, mid ka mid ah cawaaqibyada muuqda ayaa ah helitaanka badan ee waqtiga firaaqada badankood. Tani waxay ka tagaysaa meel aad u xiiso badan oo feker maskaxeed iyo gorfayn ku saabsan saadaasheena. Taasi waa sababta aysan layaab u ahayn in shirkado badan ay go’aansadaan inay cusbooneysiiyaan muuqaalka meheraddooda, marka waa wax caadi ah in macaamiisha cusub ee imaan kara ay ka soo muuqdaan farahaaga. Dabcan, aad u taxaddar maxaa yeelay boqolkiiba badan oo kuwaan ka mid ah ayaa ka faa'iideysan doona xaqiiqda ah inaan ku jirno fasax wargalin amarro waxayna u badan tahay inay ku weydiiyaan "Nicmo". Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad had iyo jeer gacanta ku hayso daawada celisa ugu fiican ee jirta: A MAYA sida cathedral. Taasi waxay kaa caawin doontaa inaad hesho macmiil dhab ah oo wax ku ool ah.
Mashaariicdu way dhacayaan!
Xaqiiqdii, taariikhda aan bilaabeyno mashruuc ayaa aad u yar, maxaa yeelay waxay guud ahaan u adeegi doontaa inay na dhiirigeliso oo aan wax ka qabanno caqabadaha cusub. Waxa dhacaya ayaa ah in marar badan aan iska indhatirno nolosha fikrad iyo mashruuc. Hubso taas kuma dheereyneyso noloshaada mashaariicdaada qaab macmal ah oo aan loo baahnayn Haddii kale, fikrad adiga ku sasabatay oo umuuqatay mid dhalaalaya waxay aakhirka kuu noqon doontaa qarow xagaaga ah. Haddii aadan mashruuc ku dhammeynin taariikhda saxda ah, waxaa hubaal ah inay ku dambayn doonto madax xanuun, lalabo, culeys iyo xitaa hurdo la'aan. Guud ahaan, xaaladaha noocan ah way kasii darayaan markaad ogaato inaad ku qaadatay dhammaan fasaxyadaadii mashruuc aan aakhirkii miro dhal noqon iyo xitaa kaba sii badan markaad isku mar wada xanuunto qaniinyada dulin xagaaga. Hal talo oo aan ku siin karno ayaa ah inaadan u oggolaan macaamiishaadu inay noqdaan kuwo aan loo dulqaadan karin koontada ka hor intaadan qandaraas sameysan hubi inay cadahay inta isbadal ee kujira miisaaniyada hana u ogolaanin waqtiyada inay sii dheereystaan. oo ay ku jiraan wax ka beddelka cusub, haddii kale waxaad heli kartaa waqti xun.
Xitaa fikradaha ugufiican waxay ku dhintaan gudaha madax aad u kulul
Xaqiiqdii majiro wax nool oo ka warqaba waxa loola jeedo in la gaaro xaalad aad u daran illaa iyo inta laga xirayo gaariga dhexdiisa bartamaha Ogast. Qof kasta oo arintaas soo maray wuxuu ogaan doonaa inay u badan tahay qaabka ugu xun ee jirdilka iyo sabab adag oo loo bilaabo naceybka xagaaga si weyn. Si kastaba ha noqotee, dareenkan xad dhaafka ah iyo jahwareerka ayaa sidoo kale ku dhici kara xagaaga meel ka baxsan gaariga. Si loo soo saaro waayo-aragnimadan cajiibka ah uma baahan doonno wax ka badan madaxa shaqada iyo ganacsiga. Layaab malahan in ganacsatada ay helaan xagaaga waqti kufiican oo ay la kulmaan xilli dhibaato ah. Si taas looga fogaado waa inaad baro inaad ka goyso oo aad isku daydo inaad fikradahaaga iyo himilooyinkaaga dhinac iska dhigtid xilliyada nasashada. Markii aad u baxdo jalaatada ama aad ku qubeysato xeebta, gebi ahaanba waa mamnuuc in laga fekero fursadaha iyo khadadka horumarka ee ka socda mashruucaaga iyo shaqadaada. Haddii aad tan iska indhatirto, waxay u badan tahay in nolosha fikirkaaga iyo mashruucaagu ay aad u gaabi doonaan intaas oo kaliyana maahan, waxaad waqtiga ku lumineysaa hab aan waxtar lahayn ama waxaad dareemeysaa tabar la'aan.
Fuuq baxa ayaa ah waxa ugu muhiimsan!
Iyada oo heerkulka aan kala go'a lahayn, madaxa ayaa la kulma cawaaqibyo aan loo baahnayn: Ciil badan, daal, tamar la'aan ... Waxyaabaha kaa dhigaya qof xirfad yar wax soo saar ka badan intii caadiga ahayd. Sidaa darteed, haddii aad shaqeyn doontid xitaa inta lagu jiro saacadaha xagaaga ee aadka u sarreeya sababo la xiriira rabitaankaaga ama si uun duruufo dhacay awgeed, waxaan kugula talinayaa inaad la joogto saaxiib, aado meel lagu nasto oo aad ku cabto xilliyada aad go'antahay. Haddii kale waxaad naftaada u gudbin doontaa nooc jirdil aan loo baahnayn oo kaliya kuu keenaya dareenno xun oo kaa horjoogsanaya awooddaada hal-abuurnimo iyo awooddaada naqshadeeye.
Muraayadaha indhaha ... Muhiim
Sababta kor ku xusan awgood, waqtiga nasashada ayaa laga yaabaa inuu dhaqso u dhaafo. Waxaa laga yaabaa haddii aad sidan ku kala baxdo xagaaga, galabnimadu si sahal ah ayey u noqotaa habeen iyo waaberi. Marka, haddii tani dhacdo, marwalba waa lagama maarmaan inaad faraha kula jirto muraayadaha qorraxda qaarkood taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad qariso raadadka habeen dheer. Haddii aan ku darno cabitaan tamar ah iyo qubayska muraayadaha indhaha, dhammaantood way fiicnaanayaan.
Ka ilaali maqaarkaaga falaaraha qorraxda
Waxaa jira isbeddel aad u caan ah oo u dhexeeya naqshadeeyayaasha garaafka waana inay si nidaamsan ugu beddelaan iftiinka qoraxda iftiinka kombuyuutarka kormeeraha. Tan, in kasta oo ay u muuqato caafimaad marka loo eego maqaarkeenna, runtu waxay tahay inay tahay wax iska soo horjeedda, maxaa yeelay waxay u badan tahay in intaad ka shaqeyneyso mashaariicdaada aad si joogto ah u booqato Facebook iyo shabakadaha kale ee bulshada iyo inta u dhexeysa nasashada iyo nasashada waxaad arki doontaa inbadan oo sawiro ah kuwa aad taqaanid oo fasax ah. Ka waran haddii xeebaha, ka warran haddii dhinacyo, ka waran haddii mojitos ... Ma ogtahay waxa aan ka hadlayo sax? Isugeyn, in iftiinka kormeerahaagu uu bilaabo inuu aad usii dheg dheg yeesho, aad iyo aad iyo aad u khatar badan. Taasi waa sababta ay aad muhiim ugu tahay inaadan ilaawin qorraxda iyo waxa looga jeedo. Dhig oo u aad xeebta ama barkadda waqti ka waqti, xitaa saddex jeer bishii. Maxaa intaas ka yar si aad u jebiso LG-ga qaab-dhismeedkaaga is-qurxinta
Is abaabul oo ka fikir ciriiriga taraafikada
Mid ka mid ah astaamaha lagu garto xagaaga waa muuqaalka taariikhaha ugu sarreeya, mararka qaarkood xitaa saacadaha ugu sarreeya. Saacadaha degdegga ah ee xeebta loo aado, saacadaha degdegga ah ee lagu soo laabto ... Sikastaba, tani waa muhiim in aan tixgelinno marka aan ka badbaadi doonno xagaagan haddii aan u aadno fasax macno ah iyo in kale. Waana iyada oo aan loo eegin intaadan aadi doonin fasax, waxaad horayba uga ogtahay wixii aan horay uga faallaynay, in taariikhadan ay u egtahay in tiro aad u tiro badan oo macaamiil ah ay soo muuqan doonaan (qaar badan oo ka mid ah dulin), laakiin waxaa sidoo kale jiri kara shaqsiyaad badan oo kugu aaminay mashruuc ay rabaan inay diyaar u ahaadaan kahor fasaxa ay aadayaan ama kaba sii xun, mashaariicda cufnaanta sare ee ay go'aansadaan inay gacmahooda ku haystaan ​​si dhammaystiran markay soo laabteen. Marka, waxaa aad muhiim u ah inaad jadwal wanaagsan sameyso waa maxay howlaha ay tahay inaad horumariso inta lagu guda jiro bilahaan oo aad abaabusho daqiiqadahaaga biyo iyo nasasho habka aad ku heysato damaanad qaadka ah inaad awood u yeelan doonto inaad wajaho dhammaan howlaha loo cayimay intaad nasanayso oo aad raaxaysanayso.
Ka ilaali naftaada hurdo la’aanta xagaaga
Habka ugu fiican ee aan iskaga ilaalin karno habeennada hurdada waa inaan hubinno inaan ilaalino heerkul wanaagsan goobtayada shaqada iyo qolkeenna. Waxaan haysannaa shaqo kufilan xilli xilli heerkulbeegyadu buux dhaafinayaan si aan fikradaheena uga ilaalino dareenka walaaca. Si kasta oo ay u yihiin waqtiyada dhalmada cariiri ah, waxaa muhiimad weyn leh inaad barato inaad kala soocdo saacadaha shaqada iyo waqtiga nasashada. Raadi waxyaabo kale in laga jaro, maxaa yeelay sidan oo kale riyadaadu way fududaan doontaa inaad gaarto sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad wajihi doonto shaqadaada maalinta xigta xoog iyo saadaalin badan.
U diyaarso fasaxaaga sida ugu fiican ee aad u ogtahay
Shaqadu waa muhiim, laakiin kama yaraysna tayada noloshaada. Sidaa darteed waa muhiim inaad u hurto waqti badan inaad naftaada kaamil noqoto si aad ugu raaxaysato ugana faa'iideysato waqtigaaga firaaqada. Waqtigu wuu dhaafaa runtuna waxay tahay in aakhirka, si kasta oo ay u fiicnaato natiijada shaqadaada, aysan awoodi doonin inay soo celiso waqtiga aad ku maalgashatay. Fikrad ahaan, waa inaadan shaqeynin ugu yaraan hal bil oo ka mid ah seddexdaan bilood, laakiin haddii aysan suurtagal ahayn, isku day inaad sameysid qorshooyin ku hodminaya oo kaa dhigaya inaad fiicantahay oo dhammaystiran. Ha seegin fursadda inaad ku noolaato waaya-aragnimo cusub oo iska tuur dhammaan mashaariicda aad kari karto, maxaa yeelay xagaagu waa waqtigii lagu raaxaysan lahaa laguna nasan lahaa maxaa yeelay Sebtember iyo sannadka shaqada cusub ayaa socda. Waxaad u baahan tahay inaad dib u soo ceshato xiriirka naftaada iyo dhinacyada kale ee noloshaada. Sidaas wax walba ka sarreeya, Ha ku mashquulin shaqada!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 9 tallaabo oo aad kaga badbaadi karto xagaaga haddii aad tahay naqshadeeye qaabeysan
Abuur fiidiyowyada joogsiga dhaqso leh barnaamijka Mooshinka
Farshaxanada ugu dambeeya: Diyaargarowga kahor dirista daabacaadda 5 talooyin